Breziliana mpankafy ao Moskoa dia nanodidina ny Breziliana sy nihira hira momba ny Fivaviana, dia manala ny zava-nitranga tao amin'ny lahatsary
Breziliana mpankafy ao Moskoa dia nanodidina ny Breziliana sy nihira hira momba ny Fivaviana, dia manala ny zava-nitranga tao amin’ny lahatsary
Jun tao amin’ny tambajotra sosialy nisy lahatsary vetaveta hira amin’ny teny portiogey. Tsaraina amin’ny trano, ny fototra, ny lahatsary nalaina tamin’ny Nikolskaya eny an-dalambe ao Mosko, izay nanangona be dia be mpankafy. Ao amin’ny lahatsary iray, vehivavy tanora iray, ny amin’ny miseho ihany koa ny Breziliana, dia voahodidina maro ny olona ao amin’ny t-shirt ny ekipam-pirenena Breziliana (tamin’ny volana jona, dia nilalao ny lalao voalohany amin’ny Amboara eran-tany) ny mpankafy manomboka mikiakiaka ny teny hoeizay azo neutrally nadika hoe»Fivaviana mavokely», dia manala ny zava-mitranga eo amin’ny sy ny lahatsary amin’ny teny anglisy, niteraka zazavavy. Izy, mihomehy, mihira eny, mazava ho azy fa tsy fahatakarana ny teny. Any Brezila nijery ilay lahatsary tao amin’ny tambajotra sosialy an-jatony, an’arivony ny fotoana.
Manoratra, indraindray ny lahatsary nozaraina tao toy ny vazivazy, fa ny ratsy valiny dia fitarainana. Tweed miaraka amin’ny fanamarihana fa ny olona mampiasa ny zava-misy fa ny vehivavy dia tsy mahafantatra ny anarana, sy nanararaotra ny vahiny, ny»tia»an’arivony ny fotoana. Mihoatra ny dimam-polo amby arivo fotoana ao amin’ny Facebook nizara ny teny izay ny mpanoratra niala tsiny eo anoloan’ny rehetra ny vehivavy ny mijery ny lahatsary, dia nampahatsiahy fa ao Brezila, isaky ny adiny roa dia ny famonoana ny vehivavy sy ny isa-minitra ny fanolanana.»Amin’ny maha lehilahy azy dia tsy maintsy ho exterminated.
Izany no tsy mampihomehy
Manamafy ireo hevitra raiki-tampisaka izay underlie amin’ny maha lehilahy azy, izay kosa dia ny hahatonga ny vono olona sy fanolanana,»hoy ny mpanoratra. Momba ilay video, ary ny tezitra valinteny ho azy nanoratra ny media ao an-toerana. Ao anatin’ny adihevitra momba ny lahatsary ahitana ireo mpanao politika sy olo-malaza fitondran-tena ny olona voaheloka anisan’izany ny SOLOMBAVAMBAHOAKA Maria amin’ny raozy zaridaina sy ny modely Fernando Lima. Ny haino aman-jery nanomboka namantatra ny lehilahy amin’ny lahatsary. Izy ireo mpiasam-panjakana teo aloha sy ny amin’izao fotoana izao. Ny fantatra voalohany ny mpahay lalàna Diego Zhadobu (lahatsary ho amin’ny ankavanana, ny ankizivavy), tamin’ny lasa ny lehiben’ny Sampan-draharaha ny fizahan-tany ao amin’ny iray amin’ireo Breziliana kaominina. Araka ny boky, izy dia voampanga ho nanao fanodikodinam-bola sy ny trosa alimony ny vadiny. Ny fandaminana ny fanjakana bar ny Pernambuco fantatra fa zhadoba ampahany amin’ny fikambanana, ary nanameloka ny lahatsary.»Antontan’isan’ny herisetra atao amin’ny vehivavy mametraka fanontaniana momba ny tokony ho tany am-boalohany fanovana ny Maoista sy ny Foto-kolontsaina izay miaina amin’ny fiaraha-monina,»hoy ny fikambanana. Taty aoriana dia fantatra Lietnà ny polisy sy ny miaramila Tsara, Eduardo niches, fanompoana ao amin’ny fanjakana Santa Catarina. Ny fitarihany dia nampanantena mba hanomboka ny famaizana fanadihadiana na mifandray amin’ny fitondran-tena tsy mifanaraka amin’ny toerana misy ny miaramila. Tsy misy Zhadobu na, eny, akany famerenana ny mpanao gazety no tsy nomena. Breziliana fampahalalam-baovao miresaka momba ny fitondrana ny olona ny fahamarinana ao Brezila sy ny manamarika fa izany no azo atao ihany ny raharaha fitarainana amin’ny vehivavy. Ao Brezila lahatsary lehibe ny fizarana dia tsy nahazo ny anaran ny vehivavy iray, ary na dia mikasa ny mitaraina amin’ny manam-pahefana, dia tsy fantatra
← Hahita Ny Portugal
Ny nahazatra ny Breziliana ny fomba hitsena anao →